I-Warsaw - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eWarsaw
Okufanele ukwenze kuWarsaw
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeWarsaw
Bukela ividiyo ekhuluma ngeWarsaw
I-Warsaw iyidolobha elikhulu nedolobha elikhulu kunawo Poland, enezakhamizi eziyizigidi ezingama-1.7. Itholakala eMfuleni iVistula (ePoland: iWisła), icishe ilingane (350 km, 217 mi) kusuka kuzo zombili izintaba zoLwandle iBaltic (iBałtyk) enyakatho kanye nezintaba zaseCarpathian (Karpaty) eningizimu.
I-Centrum (Śródmieście, Wola, Mokotów, Żoliborz, Ochota, Praga Północ, Praga Południe). Indawo yeCentrum, ehlanganisa neWarsaw Old Town edumile. Yakhiwa izifunda eziyisithupha ezihlukene futhi ingxube yezindawo zezimboni kanye nezindawo zokuhlala ezihlonishwayo zokuhlala. Kuzoba lapha ukuthi abahambi abaningi bazosebenzisa isikhathi sabo eWarsaw, njengoba izindawo eziheha kakhulu namahhotela ngokuyinhloko zitholakala e-Śródmieście, Wola naseMokotów.
I-Northern Warsaw (Bielany, Białołęka)
I-Western Warsaw (Bemowo, Włochy, Ursus)
I-Eastern Warsaw (Targówek, Rembertów, Wawer, neWesoła)
I-Southern Warsaw (Ursynów, Wilanów). Isigungu esiseNingizimu yeRoyal Route, iWilanów yikhaya laseWilanów Palace. I-Ursynów iyikhaya lesakhiwo somlando saseNatolin park nemvelo reservation, ephethe iKolishi laseYurophu Natolin eSigodlweni sasePotocki. Le ndawo yabona ukusebenza okukhulu kwePolish Home Army ngesikhathi seWarsaw Uprising.
Inhloko-dolobha ephakathi nePoland kwakuyidolobha eliseningizimu I-Krakow, kodwa iWarsaw ibilokhu iyinhloko-dolobha yezwe kusukela e1596, futhi ikhule yaba idolobha elikhulu kunayo yonke ePoland kanye nesikhungo sezwe samadolobha nezentengiselwano. Ibhujiswe ngokuphelele ngamaNazi phakathi neMpi Yezwe II, leli dolobha laziphakamisa ngomlotha. Namuhla, cishe sonke isakhiwo esiseWarsaw sisenkathi yempi yangemva kwempi - okusalele okuningi kwezakhiwo ezindala kufakwe kakhulu ezifundeni ezibuyisiwe zeStare Miasto ('idolobha elidala') ne-Nowe Miasto ('idolobha elisha'), njengezikhumbuzo ezikhethiwe namathuna, kanye nezifunda zesimanjemanje zasema-Ochota nase-Żoliborz.
IWarsaw Convention Bureau yisikhungo semininingwane sezokuvakasha esisemthethweni eWarsaw futhi inganikeza izivakashi imininingwane mayelana namahhotela, izinto ezikhangayo nemicimbi. Futhi banamamephu wabahambi. Ngeshwa, iwebhusayithi ye-bureau ayakhiwe kahle futhi ayinikezi konke lokho kwaziswa, noma kunjalo, ingasiza. Basebenza izindawo ezintathu eWarsaw.
Ngokomlando, ibhange elilungile lalingowokuqala owabantu, ngesikhathi se-9th noma i-10th century. Kodwa-ke, isifunda sedolobha elisenkabeni yamanje, elibizwa nge- Śródmieście lisemabhange angakwesobunxele. Idolobha Elidala liqukethwe ngokuphelele ngaphakathi kwemingcele enkabeni yedolobha.
Iphoyinti eliphakathi nedolobha lisendaweni yokuhlangana kwe-Al. IJerzolimskie ne-ul. IMarszałkowska, eduze komnyango wesiteshi sangaphansi kweMetro Centrum. Kuhle ukwazi ukuthi iSigodlo Sezamasiko yindawo ebonakalayo evela kunoma iyiphi indawo eWarsaw. Uma kwenzeka ulahleka edolobheni, vele uhambe ubheke eSigodlweni seSayensi neSayensi.
Ikota inqunywe ngu-Al. IJerzolimskie, ul. I-Marszałkowska, al. UJana Pawła II, kanye ne-ul. I-Świętokrzyska, iqukethe i-Dworzec Centralny, isiteshi esikhulu sesitimela, kanye neSigodlo SezeSayensi Nesayensi.
IWarsaw (yonke ikhodi yezindiza: WRW) isetshenziswa yizikhungo zezindiza ezimbili: Chopin Airport (eyaziwa nangokuthi 'Okecie') yezindiza ezinkulu. Isikhumulo sezindiza saseModlin savulwa ngoJulayi 2012 futhi sisingatha traffic olusezingeni eliphansi. Isikhumulo sezindiza i-Łódź sibuye sitholakale kalula ukusuka eWarsaw.
Iningi lezinto ezinhle kakhulu zokubona zitholakala endaweni yeCentrum, ehlanganisa izifunda eziyisikhombisa, kepha isifunda esibaluleke kakhulu ngokubona kungenzeka sithathwe njenge-Śródmieście. Zonke ezinye izifunda zinokunye okungakunikeza nakho, kepha uma uqhubeka ngeCentrum ozohamba ngazo, mancane amathuba okuthi ungathola noma yini enesithakazelo esikhulu, yize isigodlo sikaWilanów nehlathi likaKabaty zithakazelisa ngokwanele.
Umgwaqo iRoyal Road (Trakt Królewski) ekuqaleni wawungumkhondo oxhumanisa iSigodlo neNdlunkulu yaseWilanów (Pałac Królewski w Wilanowie), eminye indawo eyi-10 km. Kunamaphuzu amaningi wokuthakazelisa kule ndlela, futhi kukhona iMnyuziyamu wePosta (Muzeum Plakatu) eWilanów.
I-Warsaw Uprising Museum. Imyuziyamu Esebenzisana nayo ebhala ngomzabalazo ongokomlando wezigxobo ngesikhathi se-WWII. Ukuvukelwa kufanele ngabe kwathatha izinsuku ze-3 kuphela kepha kwathatha izinyanga ezingaphezu kwe-2. Ifilimu le-3-D elifushane elilingisa ukundiza phezu komuzi obhujisiwe linamandla.
Imyuziyamu yobuciko besimanje eWarsaw - esebhange laseVistula iMnyuziyamu icela ukungena ezweni lobuciko besimanje ngabaculi basePoland nabakwamanye amazwe.
UMnyuziyamu Kazwelonke eWarsaw uyikhaya lemibukiso engaphezu kwe-800,000 yobuciko bePoland nabomhlaba jikelele. Zibonisa zonke izikhathi zasendulo kusukela ezikhathini zasendulo kuya ezikhathini zanamuhla, kufaka phakathi imidwebo, izazi, imidwebo, imifanekiso, izithombe, izinto zokubala nezinto zobuciko obusetshenzisiwe.
Igalari eyingqayizivele yeFaras iveza okuwukuphela kombukiso waseYurophu ongapheli wobuciko besiko lamaNubian nobuciko kusukela esikhathini sangaphambi kobuKristu, iMedieval Art Gallery inezithombe ezikhethekile, imidwebo yephaneli nezinto zobuciko ezivela kuzo zonke izifunda ezihlobene nomlando Poland, Igalari ye-20th ne-21st Century iveza imidwebo, imifanekiso ebaziwe nemidwebo evela kuma-20-30's kanye nemisebenzi yefilimu, ukuthwebula izithombe, ukusebenza kusukela eminyakeni edlule ye-40. Izivakashi zingabona futhi umdwebo omkhulu wePoland othi "The War of Grunwald" nguJan Matejko (426 x 987 cm).
Imibukiso ebaluleke kakhulu yimidwebo ephinde yabuyiselwa emuva kokuthi yebiwe eMnyuziyamu Kazwelonke eWarsaw phakathi neMpi Yezwe II kubandakanya; "Owesifazane ongumJuda Ukuthengisa Amawolintshi" ngu-Aleksander Gierymski no "The Negress" ngu-Anna Bilińska.
I-State Ethnographical Museum eWarsaw (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie).
Izulu laseCopernicus (Niebo Kopernika) Ngenxa yemishini yalo, ikhwalithi yemibukiso nokuklama, amaZulu kaCopernicus angenye yamaplanethi anamuhla futhi asekuqaleni eYurophu. Inikeza imibukiso yesibhakabhaka, ukuqagelwa kwamafilimu, izinkulumo kanye nemihlangano.
IPOLIN (Muzeum Historii Żydów Polskich) Imyuziyamu yoMlando wamaJuda wasePoland yavulwa ku-2013. Lo mnyuziyamu osebenzisana kakhulu utholakala esakhiweni sesimanjemanje esakhiwe ngabaklami baseFinland abaphumelela ukuthola umklomelo endaweni eyayihlala amaJuda ghetto. Amagugu okuqoqelwa ingaphakathi lesakhiwo esibuyiselwe kahle sendlu yesikhuni yangekhulu le-17th eGwoździec (indawo eyayiyindawo yasePoland manje, eseyingxenye esentshonalanga ye-Ukraine). Vumela okungenani amahora ambalwa ukubona wonke umbukiso ongapheli.
Qhubekela ku-Tour of Warsaw - Idolobha Elidala kanye nezifunda ezizungezile zihlanganisiwe ngokwanele ukuvumela izinkambo ezimbalwa zokuhamba kahle ngokusebenzisa imigwaqo egcwele umlando. Uzobona izinto ezimangalisa obungeke uziphhuthe. Imininingwane imvamisa iyatholakala kumadokhumenti okwamukela amahostela namahhotela.
Hlola i-Praga yakudala ukuthola ukuqonda okwengeziwe (kepha kuphephile) kuma-Warsaw amadala. Thola izindawo zokudlela ezinhle zobuciko kanye nemipheme efihlekile ezungeze iZąbkowska, Targowa, Wileńska, 11 listopada, imigwaqo ye-Inżynierska. Ngobusuku, kunamakilabhu amaningi ashukumisayo kule migwaqo.
I-Warsaw Craft Beer Tour. Le Warsaw Craft Beer Tour iyi-3-ihora lokuhamba nokuphuza nge-3 yama-coolest wezikebhe abanda kakhulu akuvumela ukunambitha izinhlobo ezihlukile ze-9 zobhiya bezikebhe. Kuhle kakhulu kubathandi bezikebhe zezandla, amaqembu, amaqembu e-bachelor ne-stag.
ICopernicus Science Center. ICopernicus Science Center yenza ukuxhumana kwezesayensi kwanamuhla ngemibukiso exhumelelayo ebhekiswe emaqenjini ahlukahlukene abamukeli (abantu abadala, intsha kanye nezingane), imibukiso kanye nama-workshop ngezihloko zesayensi, izingxoxo-mpikiswano nezingxoxo kanye nemisebenzi evela kumngcele wesayensi nezobuciko. Umsebenzi walesi sikhungo ukukhuthaza ilukuluku, ukusiza ukutholwa okuzimele komhlaba, ukusiza ukufunda nokukhuthaza ukuxoxisana kwezenhlalo ngesayensi. Ngenye yezikhungo ezinkulu kakhulu futhi zesimanje zalolu hlobo eYurophu.
Amakhonsathi kanye nokwenza
I-Warsaw iyikhaya lezinkampani eziningana zomculo nezomculo eziqeqeshiwe. Ukuba inhloko-dolobha kusho iPoland National Opera neWarsaw Philharmonic (futhi, neNational Philharmonic) zibiza iWarsaw ekhaya. Kunezinye izinkampani eziningi, kufaka phakathi izinkampani zokudlala nezeshashalazi ezingaba nentshisekelo kubahambi.
I-Warsaw Film Festival (Warszawski Festiwal Filmowy),
I-Warsaw Summer Jazz Days
Umkhosi Wamasiko WamaJuda - ISinger's Warsaw (Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera),
I-Warsaw Autumn (Warszawska Jesień)
I-Old-Polish Music festival (Festiwal Muzyki Staropolskiej).
Umncintiswano weshashalazi waseGadini (uKonkurs Teatrów Ogródkowych).
UNoc Muzeów (Ubusuku obude beminyuziyamu). I-Noc Muzeów ubusuku obumnandi obubona izinkulungwane zabantu bachitha ubusuku bezulazula eminyuziyamu naseVarsovian mahhala. Kuyithuba elihle lokuzulazula nosuku lwakho lwabangani, njengoba kwenza abantu abaningi, futhi ubambe isigaxa se-ayisikhilimu esivela kwelinye lamakhofi amaningi ahlala evulekile sekwephuzile. Iminyuziyamu eminingi nemipheme kuzohlala kuvulekile phakathi kwamabili. INoc Muzeów ivame ukwenzeka maphakathi nenyanga kaMeyi.
I-Flamors Film Festival emihlanu (i-Festiwal Filmowy Pięć Smaków). Ama-Flavours Film Festival wonyaka wonyaka we-cinema evela eSouth naseNingizimu mpumalanga ye-Asia, aletha ukubukiswa kwe-premiere kwezithombe ezintsha, ezikhethwe ngokucophelela kusuka esifundeni kuya kubabukeli basePoland, kanye nama-classics aqhamuka ezinqolobaneni zase-Asia, amaphrofayli abasiki bengqephu abakhethiwe Movie cinema.
Ngokuvamile iWarsaw iyidolobha eliphephile. Isikhungo sedolobha sinamaphoyisa aqinile futhi ngokuvamile siyindawo ephephe kakhulu. Izifunda zePraga kuthiwa ziyingozi, kepha lokhu kuvame ukuba yi-hype engaphezu kwangempela. Kuyiqiniso, kungaba ukuhlakanipha ukusebenzisa ukuqapha okungeziwe uma usendaweni ongayazi kahle. Amabhasi neziteshi zikaloliwe zingaba yizinhlayiya zabangenamakhaya nabadakwa, okuyothi, ikakhulu, bakushiye wedwa.
Ukuziphatha okunobudlova akuvamile kakhulu futhi uma kwenzeka kwenzeka kakhulu okuhlobene notshwala nasebusuku. Ngenkathi ama-pub kanye nama-kilabhu ngokuvamile ephephile kakhulu, imigwaqo eseduze ingaba yizigcawu zokukhalaza, ikakhulukazi ebusuku. Zama ukugwema izingxabano. Abesifazane namantombazane ngokuvamile mancane amathuba okuba babhekane noma bahlukunyezwe ngoba indlela yokuziphatha yasePoland iyenqabela ngokuphelele noma yiluphi uhlobo lodlame (ngokomzimba noma ngomlomo) olubhekiswe kwabesifazane.
Amaphakethe angaba yinkinga kwesinye isikhathi futhi kufanele uqaphele ukubamba impahla yakho uma usesixukwini esikhulu noma emabhasini.
Izindawo eziseduze naseWarsaw ukuvakashela
I-Kampinos Forest (~ 15 km, thatha ibhasi le-708) - Ihlathi lasendle elihle nelinhle, elivame ukubizwa ngokuthi ngamaphaphu aluhlaza waseWarsaw, kanye nenketho enhle yosuku olude nomsindo wedolobha. Kunehlathi laseKampinos, iBiosphere Reserve eduze kwedolobha. Uma ufuna ukuthula, cishe uzokuthola lapho.
I-Konstancin-Jeziorna (~ 20 km, thatha ibhasi le-700) - Idolobhana lase-spa elinepaki elibanzi lidume ngemoya walo ohlanzekile nezintengo eziphakeme zezindlu.
I-Radziejowice (~ 40 km) - UJozef Chelmonski wayehlala endlini enobuhlakani enengxenye yepulazi. Uchithe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yokuphila kwakhe eseMazovia yasemakhaya. Namuhla, emakamelweni wesigodlo se-neoclassical ungabona imisebenzi eminingi yeChelmonski. Zijabulile kakhulu ngoba wayependa ngombala omuhle wombala, Wabuyisa ngempumelelo ubuhle bemvelo baleso sifunda. I-Bonfire phakathi kwenkundla engathandeki yeMazovia izoba yinto ethokozisayo. Amathafa ububanzi banzi futhi ayizicwecwe njengethebula, iziqu ezincane zamahlathi ziyisici esibonakalayo sokuma komhlaba.
I-Krakow (~ 300 km, ngaphansi kwamahora we-3 ngehora lesitimela se-IC / Ex) - Inhloko-dolobha yangaphambili yasePoland, bekuyiDolobha Lezamasiko laseYurophu e2000.
ILublin (~ 200 km) - Idolobha eliphakathi nedolobha elidala eligcinwe kahle, manje seliyidolobha elikhulu kunawo wonke futhi liheha izivakashi ezinkulu empumalanga yePoland.
IKazimierz Dolny (~ 150 km, ngaphansi kwamahora amabili ngesitimela se-TLK iya ePuławy, bese kuthi isigamu sehora ngebhasi) - Idolobha laseRenaissance elinemakethe ebukekayo, liyindawo yabadwebi naseBoheme.
Żelazowa Wola (~ 50 km) - Indawo azalelwa kuyo uFrederic Chopin.